आमसभामा सहभागी मधेसी जनता भन्छन्– ‘पहाड–मधेस’ होइन, देशको कुरा गर ! देश नरहे पहाड पनि बाँकी रहन्न
२०७३ पौष २२ शुक्रबार १८:१८:००
काठमाडौं । नेकपा एमालेसहित ९ दलले शुक्रबार राजधानीमा संविधान संशोधनविरूद्व शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । एमालेको अगुवाइमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ सहितको आमसभाको आयोजना गरिएको हो । ९ दलको साथ पाएको एमालेको दशक यताकै ठूलो जनप्रर्दनसमेत हो ।
हामीलाई गिटी वालुवा चाहियो भने लिन कहाँ जाने ? यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउनुपथ्र्यो !” सिन्धुली, उदयपुर लगायतका केही जिल्ला जोडेर प्रदेश बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।